Rikoooo အကြောင်း (85 သည့်အကြောင်းအရာများ)
ကွိုဆိုနယူးင်များ (32 သည့်အကြောင်းအရာများ)
Re: အသင်း ၀ င်သစ် (JB)
by ဂျိမ်း Beale
1 နာရီအကြာက 23 နေ့က
2 လအတွင်း2weeks ago
3 လအတွင်း 1 လွန်ခဲ့တဲ့သီတင်းတပတ်
ပျံသန်းမှုရေး Simulator ဖိုရမ် (388 သည့်အကြောင်းအရာများ)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးပျံသန်းရေး Simulator ပတ်ပတ်လည်ဘာမှအကြောင်းပြောဆို
FSX - FSX ရေနွေးငွေ့ Edition ကို (249 သည့်အကြောင်းအရာများ)
ကွိုဆို FSX အသုံးပြုသူများသည်
မော်ဒ: Gh0stRider203, superskullmaster, Dariussssss
Re: ဘိုးအင်း 737-MAX ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါလေယာဉ်အောက်မှာ Winglets
FS2004 (13 သည့်အကြောင်းအရာများ)
Pilatus PC-12 3d VC အမှား fs9
1 တပတ်အကြာ 1 တစ်နှစ်
Prepar3D (126 သည့်အကြောင်းအရာများ)
မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် Prepar3D အသုံးပြုသူများသည်
Re: ၇၇၇ အခမဲ့ဖြစ်သည် P3DV4
1 days ago2အပတ်က
ပြန်လည်: X-Plane ကူညီပါ
မီဒီယာ (29 သည့်အကြောင်းအရာများ)
အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူကဒီမှာသင့်အတွက်အကောင်းဆုံး Simulator ကို screenshots များနှင့်ဗီဒီယိုများမျှဝေပါ။
screenshots (7 သည့်အကြောင်းအရာများ)
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နှင့်အတူလေယာဉ် Simulator ကိုယူသင့်ရဲ့ screenshots များမျှဝေပါ။
Calvi - LFKC ကို Flight Studios တွင်အခမဲ့ရယူနိုင်သည်
5 လအတွင်း2weeks ago
ဗီဒီယိုများ (22 သည့်အကြောင်းအရာများ)
ဤသည်သင်တို့ပြေး Simulator ကိုယူဗီဒီယို post ဖို့ရာအရပျဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဖန်တီးမှုဖြစ်လိမ့်မည်။
လေယာဉ်ရုံ Talk ကို (27 သည့်အကြောင်းအရာများ)
အဖြစ်ကြာမြင့်စွာမလေးနက်သောဟောပြောချက်ကိုဖွင့်နှင့်အခြား sub-ဖိုရမ်များအတွက် fit မပါဘူးအဖြစ်, (နီးပါး) ဘာမှအကြောင်းပြောပြပါ။
ယင်ကောင် Tune (ဘယ်သူမျှမကသည့်အကြောင်းအရာများ)
Re: အကြှနျုပျအဂီတ Stream
3 နှစ်ပေါင်း3months ago
အဘယျသို့အဘယ်မှာဒီနေ့သင်ပျံသန်းခဲ့ (2 သည့်အကြောင်းအရာများ)
သငျသညျတစ်နေရာရာမှာစိတ်ဝင်စားစရာ, သို့မဟုတ်သင့်ပျံသန်း Simulator ကိုအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုခုနှင့်အတူပျံသန်းကြသလဲ ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူမျှဝေ။
AI အပျံသန်းမှုအစီအစဉျစိတ်တိုးပွား (70 လေယာဉ်ကျော်) နဲ့ Group မှပျံသန်းမှု ... ပျော်စရာရှိသည်
ရီးရဲလ်လေကြောင်း (25 သည့်အကြောင်းအရာများ)
စစ်မှန်သောကမ္ဘာလေကြောင်းနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်ဤအရာအရပျ။ စိတ်ဝင်စားစရာဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, အချက်အလက်များ ...
Re: SKY တိုက်လေယာဉ်များ (ရုပ်ရှင်အပြည့်အစုံ)
အခြားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ရေး Simulator (2 သည့်အကြောင်းအရာများ)
အခြားရရှိနိုင်ပျံသန်းရေး Simulator နှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်ချထားပါ။
လေယာဉ်ဂီယာပျံသန်း Simulator ကို (ဘယ်သူမျှမကသည့်အကြောင်းအရာများ)
FlightGear အကြောင်း (ဘယ်သူမျှမကသည့်အကြောင်းအရာများ)
DCS တွဲ (1 သည့်အကြောင်းအရာများ)
ဒီဂျစ်တယ်တိုက်ပွဲများ Simulator လောက
ဒစ်ဂျစ်တယ် Combat Simulator ကမ္ဘာ့ဖလား (DCS ကမ္ဘာ့ဖလား) စစ်ရေးလေယာဉ်ခြင်း simulation အပေါ်အာရုံစူးစိုက်တဲ့အခမဲ့-to-play စဒီဂျစ်တယ်စစ်မြေပြင်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
DCS တွဲကိုဒီဂျစ်တယ်တိုက်ပွဲများ Simulator လောက
3 နှစ်ပေါင်း2months ago
benchmark Sims (1 သည့်အကြောင်းအရာများ)
စွန်ငှက် BMS "ယခုမူရင်းစွန်ငှက် 4.0 ဘို့ငါတို့အသိုင်းအဝိုင်း mod ၏တရားဝင်နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။
Re: အ benchmark Sims စွန်ငှက် BMS 4.33
အွန်လိုင်းစုစုပေါင်းအသုံးပြုသူများက: 14 အဖွဲ့ဝင်များနှင့် 1716 အွန်လိုင်းဧည့်သည်များ
Loulouo, franguen, gavinjam, hansmeier, jackla, khops71, mattgonz, rozar, အခြား
ဒဏ္ဍာရီ: ဆိုက်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကမ္တာ့မော် မော်ဒီ တားမြစ်ပိတ်ပင် အသုံးပြုသူ ဧည့်သည်
စုစုပေါင်း Categories: 16